हिमाल खबरपत्रिका | बौद्धिक इमान्दारी
खसहरू पहिले बुद्ध धर्मबाट प्रभावित थिए भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । मष्टो परम्परा अति नै महत्वपूर्ण छ । मतवाली क्षत्री नै जनै लगाएर क्षेत्री भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
हिमाल (१–१५ माघ) मा प्रकाशित डा. रमेश ढुंगेलद्वारा लिखित ‘भेटिएन खसान, जडान’ शीर्षकको खोज सामग्री निकै पठनीय लाग्यो । खसहरू पहिले बुद्ध धर्मबाट प्रभावित थिए भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । मष्टो परम्परा अति नै महत्वपूर्ण छ । मतवाली क्षेत्री नै जनै लगाएर क्षेत्री भएको प्रष्ट देखिन्छ । डा. ढुंगेलको लेख खस बन्धुहरूले मात्रै होइन सबै नेपालीले पढेर मनन गर्नुपर्छ । लेखकले देखाउनुभएको बौद्धिक इमान्दारीका लागि धन्यवाद ।
हिमाल (१–१५ माघ) मा प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीको झुट’ र ‘एमाओवादीको भय’ शीर्षकको समाचार सामग्री पढें । तर अचम्मलाग्दो कुरा के भने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू यो घटनामा किन केही बोलिरहेका छैनन् ? कि उनीहरू अझै पनि सेनाकै समर्थनमा सत्तामा पुग्ने सपना देखिरहेका छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा पनि मौन बस्नु पक्कै राम्रो संकेत होइन ।
हिमाल (१–१५ माघ) मा प्रकाशित ‘पीडितका नाममा खेलवाड’ शीर्षकको समाचार मन छुने छ । जिउँदा मान्छे पनि मारिएका भनेर सरकारी ढुकुटीबाट राहत लगेको मैले पनि देखेको छु । द्वन्द्वकालमा मेरो भाइलाई बेपत्ता पारिएको थियो । त्यतिबेला राहत वा क्षतिपूर्ति नभई टोकन मनी भनेर रु.१ लाख सरकारबाट हामीले पाएको पनि हो । तर बेपत्ता परिवारलाई सरकारले दिने भनिएको रु.३ लाख आजसम्म पाएका छैनौं । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडितले ससम्मान न्याय र राहत पाउनुपर्छ । जनताको पक्षमा लडेको भनिएको एमाओवादी नेतृत्वको सरकारबाट पनि राहत नपाउने हो भने कसले राहत देला ?
गाउँलाई विकास देऊ
हिमाल (१–१५ माघ) को अन्तिम पानामा प्रकाशित ‘सरकार चाहियो’ शीर्षकको सामग्री घतलाग्दो छ । ग्रामीण भेकका जनताले थाहा पाउने गरी सरकारको उपस्थिति नहुनु भनेकै सरकार विहीनताको अवस्था सृजना हुनु हो । काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाममा विकासका कुरा गरेर मात्र जनताले सुख पाउँदैनन् । दुर्गमवस्तीका जनताले परिवर्तन भएको थाहा पाउँदैनन् भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ गाडी चढे पनि केही अर्थ हुँदैन ।
हिमाल (१–१५ माघ) मा प्रकाशित ‘फरक देखिने छटपटी’ शीर्षकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिए जस्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी ‘जनयुद्ध’ वा जनविद्रोहको नाममा जंगलमा गयो भने पनि जनताको साथ पाउँछ जस्तो लाग्दैन । माओवादीद्वारा संचालित दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट जनता आजित भइसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय क्षति र भौतिक संरचनाको हिसाबै गर्न नसक्ने अवस्था छ । आफन्त गुमाएका र घाइतेका व्यथा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यो अवस्थामा वैद्य समूहको माओवादी युद्धमा जाने कुनै संभावना देखिंदैन ।
नेताको गोटी नबन
हिमाल (१–१५ माघ) मा प्रकाशित ‘बाधक माओवादी’ शीर्षकको ट्रेड युनियनसम्बन्धी रिपोर्ट पढेपछि माओवादीले मजदूरका लागि नभई पार्टी राजनीतिका लागि संगठन गराएको स्पष्ट हुन्छ । दलका नेताहरूले मजदूरलाई आफ्नो स्वार्थको गोटी बनाउँदा रहेछन् भन्ने रिपोर्ट पढेपछि बुझन सकिन्छ । आफ्नो हकअधिकारका लागि श्रम गरेर खानेहरू एकजुट हुनै पर्दछ । तर आफू निकटका नेतालाई चुनावी खर्च उठाउने माध्यम मजदूरहरू बन्नु हुँदैन । कुनै उद्योग बन्द हुँदा नेताहरूलाई असर नपर्ला तर काम गरेर खानेका छोराछोरी भोकै हुन्छन् ।